Kwinqaku elithi "Masks zokunyuka iinwele ekhaya" siza kukuxelela izinto ezenziwe ngayo. Kakade, iinwele zihle kakhulu xa ziphilile. Nangona akahlambulukanga kakhulu, kodwa iinwele eziphilileyo zibhetele kangcono kunokuba zihlanjwe, kodwa zenziwe kwaye zome. Ukuba siphila kwilizwe elifanelekileyo, iinwele zethu zobuhle kunye nempilo zaza kuba ziyanelisa ukuba sibahlamba kanye ngeveki. Kodwa, akukho zimo ezifanelekileyo ebomini, ngoko ke iinwele zifuna iimfuno ezizodwa, ukunakekelwa ngabanye. Ixesha elide, ezilimele kwaye lomeleleyo lihlala lihlulwe kwaye lididekile. Luphi uhlobo lwenyango oluyidingayo ukukhetha iinwele ze-split kunye nendlela yokubuyisela ubuhle kunye nobuqili babo.
Ubuhle obuninzi obude bunomlutha kakhulu kwimbono yokukhula ngokukhawuleza njengenwele, kwaye ngokuqhelekileyo ukhohlwe ukusika. Kancinci ziba zincinci, ziba buthathaka, ziqhekeke kwaye ziphule. Yintoni enokuyenza kunye nendlela yokuphatha iinwele ezonakalisiweyo, ngaba unwele olunjalo lungaphathwa ekhaya? Nazi ezinye izicwangciso zokunyanga kweenwele ezahlukileyo.
1. Into yokuqala kufuneka uyinqumle ukuphela kweentloko, kunye nendlela 'yokuvuselela' iinwele, kwaye sele uqwalasela "iinwele" eziphilayo, kuba akunakwenzeka ukuba ugcine izinwele ezicutshulwa. Kodwa apha, abalungisi bezinwele bacebisa izinwele ze-split ukuze ziinqunywe "ngesishukela esishisayo", esithintela ixesha lokudambisa iinwele, njengoko "zivalwe" iingcambu zeenwele. Sika iinwele zakho ubuncinane kanye emva kweenyanga ezimbini. Xa unesikhephe esifutshane, ukwenzela ukuba i-stroke ifanise ukuma kwayo, iinwele ziya kufuneka zinqunywe. Kodwa ngeenwele ezinde, kunzima, zikhula ngokucotha ngakumbi, kwaye ngoko ufuna ukukhula.
2. Iingcingo kunye neshushu esinyayo sezinwele ziintshaba zeenwele eziphilileyo. Zomile iinwele, izikali ziqala 'ukugxotha', eziza kubangela ukucuthwa kweenwele kwaye kuya kuba nzima ukubuyisela iinwele.
3. Ukutya okunempilo. Njani ngaphandle kwayo? Izondlo zikholelwa ukuba xa udla ukutya okunamafutha kunye nokutya, kuya kuba nemiphumo emibi kwimpilo yeenwele zakho. Kodwa utywala oluninzi luzalisa iinwele ngokunyameka kwaye lunceda ukugcina umlenze weryuwa wamanzi.
4. Ebusika nakusentwasahlobo, rhoqo uthatha iivitamin complexes.
5. Musa ukuxubha rhoqo, oku kuya kuba nemiphumo emibi kwimpilo yeenwele zakho. Ngokukodwa, ukuba amazinyo enqabileyo abukhali kwiiphelo, isinyithi kunye nexesha eliqhelekileyo. Kungcono ukusebenzisa i-wood, ithambo, i-plastic brushes ngamazinyo angaqhelekanga.
6. Kunobungozi ukudibanisa iinwele ezimanzi, njengoko zolule, eziza kubangela ukunciphisa kunye nokulimala kwazo.
Emva kokuhlamba, iinwele kufuneka zifakwe ngobumnene kwaye zivumele ukuba zome ngokwemvelo, kwaye ungagcini iinwele omnye nomnye. Xa iinwele zikhwankqisiwe, kufuneka ungalondolozi ixesha kwaye uzicokise ngokucophelela ngeminwe yakho, uqale ukusuka ezantsi uze uhambele kwiingcambu.
8. Ukuba unxibe kunye nekhwele elifanayo (umsila we-pony, i-scythe njalonjalo), kungcono ukunika iinwele ukuba "ziphule" kwiimbumba zeenwele, kunye nakwiibhodi zerabha, ezithi zisetyenziswe rhoqo, zonakalisa kakhulu iinwele. Kodwa ke, abacebisi beewele bacebisa ukuba basuse iinwele kwiimeko ezibi zingaphantsi kwengubo, intonga yokuzikhusela kwimpembelelo embi: ukusuka kwimvula, kwikhephu kunye nokuqhagamshelana noboya kunye nezambatho zokwenziwa.
9. Ukuba usebenzisa iimveliso zonyango eziqukethe utywala, kufuneka ukwazi ukuba utywala iinwele zakho.
10. Kwonyango lweyona nto ibaluleke kakhulu ukunyuka okunamandla nokucwangcisiweyo. Ngako oko, kubalulekile ukukhetha ezo zinto zonyango zonyango eziza kuhambelana nawe. I-cosmetology yanamhlanje inika amaninzi amanyathelo angaphatha iinwele ezonakalisiweyo: ukhilimu unyango, imaski, i-softening and moisturizing conditioners. Ezinye zala mayeza kufuneka zishiywe kwizinwele zokukhusela okungcono kunye nokunyuka, kwaye ezinye zifuna ukuba zihlanjwe ngokubanzi. Sebenzisa imali ukusuka kumacandelo ogqirha okanye oqeqesho.
11. Ama-serum kunye nama-shampoos angasetyenziselwa ukukhawuleza ukukhula kweenwele ukwenzela ukuba iinwele zeenwele zihlaziywe ngokukhawuleza kwaye iinwele ezinempilo zikhula ngokukhawuleza.
Imaski yasekhaya yokunyuka kweenwele
Ezi maski ziya kunceda ukukhawuleza ukubuyisela iinwele. Masks elula kakhulu asetyenziswa ngamafutha. Isiqingatha seyure ngaphambi kokuba uhlambe intloko yakho, gcoba umnquma okanye ioli ye-almond kwizinwele zakho, uhlambe isikhumba kancane.
Njengombumba wekhaya, ioli ye-burdock ifanelekile, kufuneka ifuthe kwindawo yokuhlambela amanzi. Ngaphambi kokuba uhlambe iinwele zakho, iyure ngaphambi kokuhlamba, siya kusebenzisa ioli efudumeleyo kwiinqwelo ezidibeneyo, uze ugqubuthele intloko ngentonga yelitri okanye i-cellophane. Geza iinwele zakho, uhlambulule ngamanzi kwaye wongeze inani elincinci lejisi lemon.
Njengoko unyango lwamaqela lucebisa, xa izinwele ziqhekekileyo, kufuneka uhlanjulise iinwele ezonakalisiweyo kunye neengcawa zonyango: amaqabunga e-birch, i-mint, i-linden, i-chamomile, ngoko ukugqitywa kweenwele kuqala ukubuyela ngokukhawuleza.
Ekhaya, ukuba unwele lweenwele, unokwenza imaski, ngenxa yoko, ubetha isikhupha seqanda nge-teaspoon yeoyile yemifino kunye nenani elifanayo le-cognac kunye nobusi. Le nkonzo isetyenziselwa imizuzu engama-30 ngaphambi kokuhlamba iinwele.
Umququ odlayo wejisi lemon, i-kefir ne-yolk yolki
Thatha i-yolk, i-tablespoon yeoli yeoli, ijisi lemon kunye ne-100 grams ye-kefir, ngaphambi kokufudumala, kwaye udibanise yonke into ibe yindoda ehambelanayo. Umxube obangelwayo usebenza ngokulinganayo ngaphezu kobude bezinwele zonke, sigubungela iinwele nge-cellophane, ukufumana umbane wokutshisa kunye nokufaka intonga yethu ngendwangu. Emva kweyure enye, siya kuhlamba intloko nge-shampoo efanelekileyo ehambelana neentlobo zakho zeenwele, uze uhlambulule iinwele zakho kakuhle ngamanzi afudumeleyo. Le maski yenziwa kanye ngeveki, inkqubo yokonyango yinkqubo yesithandathu okanye yesibhozo.
I-mask ye-Cognac-honey for split hair
Sithatha i-henna, i-cognac, i-oyile yemifino, u-honey kunye ne-yolk enye. Siyifakanya kunye nobunzima obufanayo kunye nokuyifaka kwizinwele, vala intloko kunye ne-cellophane kwaye uyifake ithawula. Emva kweyure, yihlambe uze uhlanza iinwele zakho ngamanzi afudumele. Senza imaski kanye kwiintsuku ezi-7. Inkqubo yokonyango yinkqubo ye-6.
Ukubuyiselwa kakuhle ubisi obunqambileyo obisi obunzima okanye ubisi obomvu. Faka isicelo seenwele kabini kwixesha elingama-20 okanye kwi-30 imizuzu, uze uhlambe kunye ne-shampoo kunye namanzi afudumeleyo.
Ekhaya, ngenxa yokunyamekelwa kweenwele eziqhekekileyo, ungasebenzisa i-burdock kunye neoli ye-alimondi, exutywe kumlinganiselo we-1: 3 kwaye ubeke eziphelweni zeenwele. Le maski yenziwa kanye ngeveki.
Njengokuba imaski elula kunazo zonke zezinwele eziqhekekileyo, sithatha ubisi obumuncu, esiwahlambayo kwizinwele kwaye sishiye isiqingatha seyure ngaphantsi kwekhanda, kwakhona kwakhona siya kufaka ubisi obunzima, size sihlambe nge shampoo.
Njengoko iimaski ixesha elide zisetyenziselwa ubisi oluphucukileyo kunye ne yogurt. Benza ifilimu ekhuselekileyo kwiinwele, ukukhusela i-cuticle yeenwele kwi-delamination, ukhusela kumonakalo wombane. Sifaka i-scalp kunye neenwele ze-kefir, sibophe intloko yethu ngehawula, gxiba isigqoko kwaye ubambe imizuzu engama-15 okanye engama-20.
Ngeenwele ezomileyo, enye ipoyiyo yeoli yeoli okanye ipoyiyo eyodwa yeoli ecocekileyo ne-½ ijusi yamanzi ifanelekile. Sigcina le mxube kwizinwele zakho imizuzu engama-20.
Eyona nto ikhethiweyo yimaski amaqanda. Kule maski udinga i-yolk, equlethe izinto ezincedo eziluncedo kuyo nayiphi na inwele. Ngeenwele ezomileyo kwi-yolk ecocekileyo, unokongeza ipoyiji yeoli, i-castor, ioli yeburdock, kwiinwele eziqhelekileyo ungasebenzisa imaski ye-yolk ecocekileyo.
Kuhle ukuba wenze ioli efudumeleyo, iyakwenziwa kwi-almond, olive, castor, ioli yeburdock. Ngaphambi kwenkqubo, siya kutshisa ioli okanye uthathe umxube weoli kwaye uyifake kwizinwele. Siza kwambatha isitya, sifudumale ngehawula kwaye sibambelele imizuzu engama-30 okanye engama-40. Ngaphambi kokuba uhlambe izinwele zakho, sebenzisa lo mxube: i-yolk yeqanda, i-2paspoon castor kunye neepuni ze-2 zeoli yeoli. Kodwa okokuqala siza kufudumala iioli, uqalise i-yolk, kwaye unyuke kwi-scalp, kwizinwele, ngokukodwa kwizinto ezilishumi ekupheleni kweenwele. Siza kulufaka intloko nge-polyethylene, kwaye siyibeke ngebheyili. Gcina le mask kwiyure enye. Emva koko sihlamba iinwele nge-shampoo.
Umask ovela kwingcambu ye burdock
Thatha i-100 grams yeengcambu ezitshatshile ze-burdock, uyiqhekeza kwindawo yokugaya inyama. Sifaka ama-gram 200 weoli yelanga. Ukuba ioli ye-sunflower ayitholakali, yitshintshe, nayiphi na enye ioli enayo kwikhaya lakho: i-almond, umnquma, i-castor. Sifaka ingcambu kwioli, kwindawo efudumeleyo emini. Emva koko fakela ibhedi yamanzi, yizise kwimathumba, upheke, uvuselele imizuzu engama-20. Siyicoca ioli kwaye siyifake kwisitya. Le maski ixutywe kwi-1 okanye kwi-1.5 iiyure ngaphambi kokuhlamba iinwele.
Thatha i-yolki yeqanda, isipuni se-cognac, i-tablespoon yeoli ye-castor, i-teaspoon yobusi. Zonke zixutywe kwaye zisebenza kwizinwele zemizuzu engama-30 okanye engama-40, uze uhlambe ngamanzi afudumele kunye ne-shampoo.
Ngaphambi kokusebenzisa le maski, sinqumla iiphelo zeenwele, ukwenzela ukuba iinwele zikwazi "ukuphefumula" ngokukhululekile.
Siza kuvula i-yolk yeqanda size sidibanise ne-1 isipuni seoli ye-castor. Votrem lo mxube kwi-scalp kwaye udibanise kakuhle iinwele phezulu. Ukufudumala, gquba iinwele ngeembumba zeplastiki, uze uzigubungele ngentambo efudumele. Gcina le maski kwiminyaka engama-60 okanye engama-70, uze uhlambe intloko yakho nge-shampoo "elula." Uze uhlanjululwe iinwele ngamanzi, ukuze wenze uboya bukhanye, faka isipuni se-chamomile okanye isipuni sejisi lemon (i-blondes) okanye i-1 okanye i-2 tablespoons ye-aple cider iviniga kwi-1 litre yamanzi (i-brunettes kunye neentombi ezinobuninzi obomvu).
Umaski we kefir ungcono ukusebenzisa ebusuku, kwaye kusasa siya kuhlamba. I-Kefir enomxholo we-fat okanye i-3%, sebenzisa ubude beentloko kwaye ushiye imaski kude kube sekuseni.
Thatha iibhepuni ezi-2 zeembiliso ezixinyiweyo, ikota yeglasi ye-kefir. Hlanganisa zonke izithako, kwaye vumela imaski imile ide imvubelo "ifanelwe". I-mask iya kusetyenziswa ekupheleni kweenwele ezivela kwiingcambu ukuya kwiingcebiso, siya kulufaka kwaye siwubambelele isiqingatha seyure, uze usihlambe.
Mask of oil burdock
Thatha isipuni sejisi lemon, ii-2 teaspoon zeoli ye-castor, ii-2 teaspoons zeoli ye-burdock. Zonke ezidibeneyo, siza kufaka i-mask kwizinwele kwaye siya kugcina imizuzu engama-30 okanye-40, ngoko siya kuhlamba iinwele nge-shampoo.
Thatha i-yolk ne-tablespoon yeoli ye-castor. Okokuqala siza kuhlanza i-yolk, uze ungeze ioli. Siza kufaka i-mask kwizinwele kwaye sibambe iiyure ezi-2 ukuya kwezi-3. Geza iinwele nge-shampoo.
Isixhobo esihle sokomeleza iziphelo zeenwele. Thatha ingilazi yamanzi abilisiwe, engeza 2 iispuni zamanqatha. Izinwele zifakwe kwii-pigtails, kunye nokuphela kweenwele esisezantsi kwiglasi kunye namanzi enyuka imizuzu eyi-10. Masomile kwaye sidibanise iinwele.
Beka isikhwama se-henna kwisitya, engeza amanzi abilayo ukuze ufumane i-gruel, makhele. Omnye umqubu ofudumeleyo we-henna uya kufakwa kwizinwele kwaye uza kuqhubeka imizuzu engama-30 ukuya kwe-40, ngoko uya kuhlamba ngaphandle kwe-shampoo. I-mask enjalo ibuyisela kakuhle iziphetho zokuboya iinwele.
Iziphelo zeenwele zidinga ukondla okunzulu, zinyanzelise kwaye zinyuka. Kule njongo kulunge ukucwangcisa ukwahlula ngamafutha ahlukeneyo, ushiye i-1 okanye iiyure ezimbini. Ukwahlula izinwele kukulungele ukusebenzisa i-mayonnaise ye-fat imizuzu engama-30 okanye engama-40.
Imaski yokwelapha yobusi
Thatha iipuni ze-2 zeoli yengqolowa yeoli, isipuni esingu-1 se-aple cider viniga, i-1puni ye-honey. Hlanganisa zonke izithako kunye ne-vtrem, ukuxubusha kancane kwizinwele ezimanzi. Gubungela intloko ngefilimu uze uyibambe imizuzu engama-30 okanye engama-45. Emva koko uhlambe intloko yakho nge shampoo encinci, hlambulula intloko yakho kakuhle. I-mask inikeza ukukhanya okumnandi, ilulaza ubuso obubuhlungu beenwele.
Ukuze uhlambuluke iinwele ezinqabileyo
Thatha 1 litre yamanzi kunye nepunipoon yeyinti okanye itiye. Sixuba i-tea kunye ne-mint size siyigcwalise ngamanzi abilayo. Sifaka imizuzu eyi-15. Ukunyamezela nokupholisa. Emva kokunyanga kwenywele okanye emva kokuhlamba, hlambulula iinwele nge-infusion efunyenweyo.
Emva kweemaski zemvelo, ukukhanyisela iinwele, hlambulula kakuhle ubunwele obumnyama ngesisombululo seviniga - iispuni enye ngeyure nganye yamanzi, kunye neenwele ezimhlophe zihlanjululwe kunye ne-decoction ye-chamomile.
Ngoku siyazi ukuba ziphi iimaski zokunyuka kweenwele ekhaya. Siyathemba ukuba uya kufumana ezi ngcebiso kunye nemaski eluncedo ekwenzeni unyango lwezinwele.
Iintlobo zeenwele kunye nendlela yokunyamekela?
Ukusetyenziswa kwamafutha abalulekileyo ekunyamekelweni kweenwele
Ukuzilungiselela njani uMnyaka omtsha
U-Albina Dzhanabaeva uloyiko lokwakheka, umfanekiso
Indlela yokwenza inhlanhla ebomini bakho?